Home Wararka Danjiraha Somaliya u Fadhiya Kenya Mudane Tarzan oo Farmajo ugu Baaqay inuusan...
Danjiraha Somaliya u Fadhiya Kenya Mudane Tarzan oo Farmajo ugu Baaqay inuusan Dalka Burburin.
Iyadoo maalinba maalinta ka dambeysaa la soo nacayo Farmajo ayaa waxaa baraha bulshada wareegaya hadal qiimo badan oo uu jeediyey Danjire Maxamed Axmed Nuur Tarzan, kaas oo uu ugu baaqay Farmajo inuusna dalka burburin ee uu ka tago intii uu dalka burburin lahaa. Danjiraha oo u muuqday qof ay lexajeclo badan dalkaan ka hayso ayaa si dareen leh u muujiyey in xaaladda dalka ay ku socoto khatar keeni kartaa inuu dalka markale ugu burburo gacanta Farmajo sidii uu ugu burburay gacantii Maxamed Siyaad.
Guud ahaan cidkasta oo dareen iyo lexajeclo dalka ay ka hayso waxay maanta Farxad weyn u arki lahayd Farmajo oo Saaxadda Siyaasadda Somaliya si uun uga baxa, ha dhinto ama ha dhaqaaqe, waana ducada ay cid waliba ku duceysaneysaa inuu dalkan Ilahaay dhinac u dhaafiyo Farmajo iyo Fahad.
Waa markii ugu horreysay :
Ee dhallinyaro Somaliyeed inta been loo sheego , kadibna Itoobiya laga iibsado si xaabo looga dhigto dagaalkii ay kula jirtay Tigray.
Ee Madaxweynayaal dalkooda si nabad ah ku jooga guryahooda lagu weeraro oo loo qasdo in la dilo, damqashada dalka iyo dadka ay muujinaayaan darted.
Muwadin Somaliyeed loo gacan geliyo Cadow soo jireen ah ee uu kala dagaallamayey gumeysi ay ku hayso dad Somaliyeed.
Madaxweyne uu Villada soo fadhiisto isagoon kala jecleyn xanuunka iyo ooyinnta hooyooyinka Somaliyeed ee Caruurtooda xaabada dagaal uu uga dhigay dalk shisheeya oo aan cadow nahay , ee aan xataa u quurin inuu la hadlo oo ka dhuumanaya.
Ee 1000 qof ay hortiisa ammaandarro ugu dhimatay, hogaamiye sheeganaya muslimnimo oo aan haddana ka xanuunsan jiirna u dubaaxan marka ay dal shisheeya ay wax yar ka dhacaanna tacsida aan looga hormarin.
Uu Madaxweyne Somaliyeed dakadaha dalkiisa u saxeexo dal raba inuu gumeysto dalkiisa si ay ugu fududaato inuu qabsado dalkaas.
Ee xaraash loo diyaariyo kheyraadka dal madaxweynuhuna uu yahay cidda xaraashaka dabada k ariixeysa, isagoo kaashanaya tuugo kale.
Waa markii ugu horreysay ee Safiir isagoo ka wakiil ah Madaxweynaha dalkiisa uu kula taliyo Madaxweynihii uu matalayey inuu xilka u qalmin ee uu isaga tago si dalka uu safiirka matalaa uusan u burburin mar kale.
Isku soo duub taladaan Danjire Tarzan cidi ma qaadan oo Farmajo isma casilin, mana sheegin inuu yahay murashax oo halkeediina lagama soo qaadin, waxaana la bilaabay in Xamar laga eryo Danjire Tarzan oo la yiraahdo ku noqo Nayroobi, iyadoo si cad loogu diiday Tarzan inuu u tartamo xubinimada Aqalka sare ee dalka maadaama uu muddo dheer soo shaqeeyey inuu inta ka dhiman hawlgabkiisa ku biiriyo in dalka laga shaqeeyo sharcdejintiisa iyo wixii uu ka qaban karo.
Waa dhab in Fahad iyo Farmajo aysan u adkeysan karin qof runta u sheegaa ee mar waliba ay rabaan dad u nacamnacamleeya . Sida la og yahay Danjire Tarzan ma ah ruux ceynkaas oo caada qaata ah ee waa halgamaa ku dhiirrada inuu runta sheego. Waana kano o hadda Farmajo oo xilka uu hayo u magacaabay ku caddeynaya inuusan Farmajo ahayd nin wax dhisaa ee uu yahay mid wax dhisan dumanaya kuna leh ‘War Farmajow ha duminin ee ka tag, inataad dhaawici lahayd dalkaan waad dhaawacdaye”